Septambra 2019 | Save A Train
Month: Septambra 2019
Home > Septambra 2019
ny Helen Jackson
Fotoana famakiana: 4 minitra -Jatony manintona sy manan-tantara lehibe fomba fijery izay miainga avy amin'ny masoandro nanoroka dranomasina ho cavernous tendrombohitra, Eoropa tena manana rehetra. Izany no tsara toerana ho an'ny dia lavitra, satria azo atao ny mandeha amin'ny firenena iray mankany amin'ny iray hafa…
Fotoana famakiana: 5 minitra Ireo Top Tips ho an'ny biby fiompy mandeha amin'ny tokony hanampy hanamaivana ny fanahiana. Satria ndao hatrehina izany, niara-dia ny biby fiompy ny saina! Fa inona no mampiady saina kokoa, dia ny mieritreritra ny handao ny biby any an-trano na eo amin'ny fikarakarana ny hafa. Mazava ho, tsy misy olona…
Fotoana famakiana: 4 minitra Barany velona ny mozika miseho na aiza na aiza any Eoropa, fanatitra fomba hamono fotoana ao amin'ny toerana mavitrika zava-pisotro sy ny hira mikoriana malalaka. Raha mitady hanana fahafinaretana kely ao an-tanàna ianao mandritra ny dia ataonao, dia efa nahazo soso-kevitra vitsivitsy. Eto dia…
Fotoana famakiana: 4 minitra Ny mampientam-po ampahany nandeha any ivelany no unpredictability ny traikefa. Rehefa mandeha any an-tany hafa, dia ho hita amin'ny kolontsaina samy hafa, Fikirana, sy ny zavatra niainany. Na dia manao fikarohana, azonao antoka fa ho gaga ny sasany…
Fotoana famakiana: 8 minitra Mieritreritra ny Hatao eny izy noho ny andro vitsivitsy? Ary ahoana ny mieritreritra indray andro any fitsangatsanganana nandeha lamasinina avy any Paris? Zavatra fiarandalamby dia fifadian-kanina, tsotra, ary fomba ara-tontolo iainana hitetezana any Frantsa. Miaraka Save A Train, afaka mamandrika ianao ao anatin'ny minitra vitsy…
Fotoana famakiana: 6 minitra Mitady Indrindra Mahavariana Anjerimanontolo In Eoropa? Vakio avy eo amin'ny! Fantatsika mifidy oniversite dia manan-danja ny safidy. Mazava ho azy, tsy maintsy mandray an-mandinika ny fampianarana sy ny fianarana eny amin'ny oniversite fotodrafitrasa izay manome rehefa mifidy izay olona hanatrika. Na izany aza, indraindray a…